Shiinaha Laba Arag Foornada Xajmiga leh Foornada Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | Dabka Dahabka
- Kuleyl sare: Naqshadaynta Firebox waxay bixisaa waqtiyo gubasho oo dheer iyo xitaa qaybinta kuleylka.
- Meel-ku-keydin: Lugaha ayaa isku laaban oo ku hoos dhaca jikada shooladda si fudud loogu kaydiyo.
- Nadiifi oo ku habboon: saxaaraddii dambaska waxay bixisaa qabashada doorka dambaska, ka dhig nadiifinta mid aad ugu habboon.
- Shidaal la heli karo: Isticmaal ilaha shidaalka dabiiciga ah sida xaabada, laamaha, qori jajabka, iwm.
- Daawashada muraayadaha: Daaqadaha muraayadaha u adkaysta heerkulka sare waxay kuu oggolaanayaan inaad ku raaxaysato u fiirsashada dabka iyo kormeerida gudaha adigoon albaabka furin, kuna darey jawi raaxo leh iyo guud ahaan diirimaad.
Waxyaabaha: Saxanka birta
Cabir: 67.5 * 38 * 62 cm
Miisaanka: 36.05 kg
Nooca Shidaalka: Wood iyo Pellet
Foornada alwaaxda leh sharaxaadda foornada
Foornada alwaaxa leh foornada waa kululeeyaha alwaaxa aasaasiga ah ee loogu talagalay loona dhisay waxqabadka, iyada oo aan qiimo lahayn. Albaabka sanduuqa dabka galaasku wuxuu bixiyaa aag ballaadhan oo daawasho ah, sidaa darteed waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaal cad oo dabka dillaacaya. Albaabka foornada sidoo kale waxaa lagu heli karaa ikhtiyaar muraayad ah, markaa waad arki kartaa badeecooyinka aad dubtay adigoon albaabka furin oo aan qatar ugu dhicin dhicitaanka keegaaga iyo rootiyadaada macaan. Dusha sare oo fidsan oo loogu talagalay karinta wuxuu gaarayaa illaa 600 digrii, dhammaan qalabka wax lagu gubo alwaaxda daabacan daahan heerkulkiisu sarreeyo, ha ka welwelin dhaawaca dusha weyn. Grate-yada ku jira sanduuqa dabka waxay u oggolaadaan hawada inay gaarto qoryaha hoostiisa si ay u sii gubato si qoto dheer oo ay u nadiifiso dambaska xitaa inta uu dabku weli holcayo.
Wadarta miisaanka kariyaha alwaaxda waa sahlan tahay in la qaado. Dhuumaha dhuunta marginal si loo helo meel karinta oo badan. Shaki kuma jiro taas, Kuleylkeena kuleylka iibinta qoryaha ee iibka leh lugaha laabmaya ayaa loo dhisay si ay u sii socdaan. Iyada oo leh kuleyl iyo karti karis, kariyaha alwaaxa gubanaya ayaa ah "halista labada". Ku habboon daaradda, dhismayaasha dibedda iyo inbadan. Qaxwaha iyo digsiyada kuleylka ayuu dusha ka ilaaliyaa, wuxuu keenaa biyo karkaraya wuxuuna kariyaa hilib doofaar iyo ukun!
Foornada alwaaxda leh faahfaahinta foornada
Waxyaabaha: saxanka birta ah
Cabirka: 675W * 380D * 620H mm
Cabirka sanduuqa 700W * 400D * 640H mm (Maraakiibta qafiska badbaadada si gooni gooni ah)
Cabbirka Cabbirka Tuujinta: 100 mm
Talooyin ku Saabsan Qalabka: Ku darida utility-ka wax lagu kariyo, waxaan kugula talineynaa qiiqa 100 mm. Bilaabid fudud, jel dabka oo liita ama dhuxul shid ku leh weel oo lagu shido dab, ma laha Qiiq Muuqaal ah.
Foornada alwaaxda leh sawirada foornada
Hore: Kuleyliyaha Kuleyliyaha Kulaylka la qaadan karo ee BBQ
Xiga: Kaambada Fudud ee Dhirta Xajmiga ah ee Taambuugga
Foornada Qoryaha Beerta
Bannaanka Kariyaha Qoryaha
Foornada alwaaxda leh foornada
Teendhada Qoryaha Teendhada, Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, Kaam Dabka Gubay, Foornada Cuntada lagu karsado, shooladda birta ah ee birta ah, Bannaanka Alwaaxda Gubashada,